Manchastar Yunaayitid garaagarummaa Man Siitii wojjiin qabu dhiphisee - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manchastar Yunaayitid garaagarummaa Man Siitii wojjiin qabu dhiphisee
Manchastar Yunaayitid taphicha suuta eegale. Inumaa Saawuzhamtan ture goolii Graaziyaanoo Peeleen galcheen dursa fudhachuu kan danda’e. Ta’us garuu, garee taphattoota ciccimoo kanneen akka Antonii Maarshiyaal qabuuf wanti hindanda’amne jira hinfakkaatu. Maartiaal tapha har’aa irratti goolii 2 laakkofsiise. Gooliin Maarshaal lamaan mooraa Manchastar keessatti tasgabbii uumuu bira dabritee gareen kuni morkataa isaa akka dursu taasisteerti. Taphaafi gooliin Maarshaal laakkofsiise taphataan kuni kilabii isaaf hangam murtessaa akka ta’eefi ta’uuf deemu kan nutti argisiiste ture. Goolii sadaffaa Manchastariif kan laakkofsiise Mataa ture.
Saawuzhamtaniif goolii lammaffaas kan laakkofsiise Graaziyaanoo Peelee ture. Gareen Saawuzhamtan yaalii goolii heddu godhus irra jireessa hiree uumee gara gooliitti geeddaruuf hinmilkoofne.
Taphni Manchastarfi Saawuzhamtan leenjistoota garee lamaanii lammummaa Hoolaand qaban (van Gaal vs Koeman) wolhafoo kan dhaabe ture.
Tapha Priimer Liigii guyyaa har’aa geggeeffameen Liivarpool Noorwichiin irratti ol’aantumma mirkaneeffachuu hindandeenne. Liivarpool garee Noorwiich wojjiin 1 – 1’n gargar baye. Liivarpool taphaanis ta’ee gooliin caalmaa osoo hinfudhatin hafe.
Daani’eel Staariij yeroo baatii 5 booda kan Liivarpoolif hiriire. Tapha har’aa booda Liivarpool sadarkaa 13ffaa irra turun dirqii itti ta’eera.
Previous articleCheelsiin Arsenaaliin yoo moo’atu Manchastar Siitiin Weest Hamiin injifatame
Next articleJireenyatti milkaayuu barbaadduu? Qabxiilee kanniin irratti xiyyeeffachuu hindagatinaa